Qarax Iyo Dil Ka Dhacay Magaalada Muqdisho Iyo Duleedkeeda. – Bogga Calamada.com
Rag hubeysan oo ka tirsan shabaabul Mujaahidiin waxay howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen deegaan dhaca duleedka maagalada caasimadda ah ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka dowladda federaalka ah.
Howlgalkan gaarka ah waxa uu ka dhacay deegaanka Weydow ee duleedka magaalada Muqdisho waxayna Mujaahidiintu ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda oo lagu magacaabi jiray Carabeey kaas oo ahaa nin ku caanbaxay diin la dirirka ah.
Dilka askariga ka dib waxaa goobta soo gaaray maleeshiyaad kale oo ka tirsan ciidamada dowladda Ridada kuwaas oo goobta ka qaaday maydka askariga la dilay iyadoo goor dambena raggii howlgalka fuliyay ay si nabdoon kaga dhaqaaqeen halka uu dilku ka dhacay.
Dhanka kale waxay ciidanka Mujaahidiintu gaar ahaan guutooyinka qaraxyada Mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada Banaadir qarax aad u xooggan ku weerareen fariisin iyo isbaaro maleeshiyaad ka tirsan kooxda uu hoggaamiyo Farmaajo ay ka samaysteen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Heliwaa.
Qaraxa oo ahaa mid culus waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaan Cali agoon oo ka tirsan xaafada suuqa xoolaha degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay laga soo tabiyay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo maleeshiyaadka soo gaaray.
Ciidamada shabaabul Mujaahidiin waxaa u suuragashay inay kala eryaan ciidamada dowladda ee isbaarada u tiillay Cali agoon waxayna maleeshiyaadkan caan ku ahaayeen baada iyo boobka ka dhanka dadka rayidka ah ee adeegsada waddada ay Isbaaradu dhigteen.